Indlela yokoyisa indoda | Amadoda aseStylish
Indlela yokoyisa indoda
UAlicia tomero | 21/11/2021 11:51 | Isibini kunye nokwabelana ngesondo
Ubugcisa be woyise umntu yinto ebisenziwa ukutyhubela iinkulungwane. Indlela yokuhenda itshintshile kule minyaka idlulileyo kwaye iindlela ezifanelekileyo zesindululo esilungileyo zingaphezulu kakhulu kunomhla.
Zonke iziseko ezisetyenziswayo namhlanje zinezityhilelo ezininzi. Nangona okuninzi kuyitshintshile indlela yethu yokwenza okanye inkululeko yokuzikhethela, rhoqo kukho iindlela zokoyisa indoda ezihambelana nemilo echanekileyo.
Ungalibali ukuba xa kufikwa ukuhenda okanye ukoyisa rhoqo ibiyinto yamadoda. Kodwa asizukuzikhohlisa, ngoku abafazi nabo bafuna ukuphumelela kwabo kwaye ngenxa yoko kufuneka bathathe uxanduva kwaye bazi ngokweenkcukacha. luqala njani olo loyiso.
1 Zazise kwaye uzibonise ukuba unjani
2 Lufanele lube njani unxibelelwano lwakho?
3 Ndenze ndikukhumbule
4 Beka imfihlelo encinane
5 Mhloniphe loo mntu kwaye ubanike ixesha lakhe
Zazise kwaye uzibonise ukuba unjani
Lolona vavanyo lulungileyo onokuthi ulunike indoda ekufuneka idibane nawe. Siyayazi loo nto Umzimba uwela ngaphakathi kweempawu zokuqala ezigqamayo xa uthi krwaqu, kodwa kukho amadoda amaninzi avavanya ubuntu belo bhinqa.
Yenza ukuba unxibelelwano lwenzeke kufuneka ubonise ukuba ukhona.
Ncuma kwaye uzazise, ukuba nguwe. Asinakuzenza ngathi singengobani, kuba ukuba sifuna imihla emininzi eya kubonisa.
Kukho oko zithembe, ukuba ukhuselekile emazwini nakwizenzo zakho.
Umzimba wakho akufuneki ube yeyona nto ibalulekileyo, awukwazi ukugqibelela, kodwa inkangeleko yakho kufuneka icoceke kwaye ilungiswe. Kuya kufuneka ube nekratshi, uneenwele ezichanekileyo kunye ne-makeup, kwaye unokongeza i-perfume ephawula ubuntu bakho.
Lufanele lube njani unxibelelwano lwakho?
Sukuphulukana noncumo lwakho lowo ngowona mthombo wokuqalisa ubuhlobo obuhle. Mjonge emehlweni nokuba uneentloni, kodwa yenye yezinto ezibonisa ukhuseleko. Incoko mayibe yonxibelelwano. Sukulinda ukuba ngumlinganiswa ophambili kwaye uhlale uthetha ngamabali akho, umamele nawo.
Phulaphula ngenyameko kuyo yonke into endiyithetha kuwe, mxhaseni kwizigqibo azenzayo, nimnike icebiso nize nivuleleke ekunikeleni naluphi na uhlobo lwecebiso elinokuba luncedo. Abasetyhini banezixhobo ezininzi eziluncedo ukuba bakwazi sinikela ngayo yonke inkxaso yethu, kwaye indoda iya kuxabisa.
Kuphephe ukuxambulisana ngezinto ezingabalulekanga, soloko wonwaba kwaye ubonise umdlandla wakho ngalo mzuzu mkhulu. Kufuneka usoloko ubonisa uvelwano kunye nolonwabo ukwenza intshukumo elungileyo. Awunakusoloko uphikisana okanye unomsindo malunga neengxaki ezincinci, kuba oko kuya kubangela ukuba uhambe.
Akukho nto iphosakeleyo ukunikela ingqalelo yakho ukuyiphulaphula kwaye ukunika umdla wakho ekubeni uyakuthanda. Kodwa musa ukuyinika amandla amaninzi, yenza ukuba ibonise ukuba wena nawe unobomi bakho.
Kwidinga lakho unako ncokola, wonwabe, udibane... kwaye kungakhathaliseki ukuba ufuna kangakanani ukuba uhlale ngonaphakade, unako phelisa umdlalo ngesiquphe. Unokwenza nasiphi na isizathu, ukuba umdla wakho usekho, kodwa kufuneka uhoye ezinye izibophelelo. Ngale ndlela uya kusala efuna ukubuyela emva ukuze enze elinye idinga aze ngaloo ndlela acinge ngawe aze akukhumbule.
Beka imfihlelo encinane
Le nxalenye inento yokwenza nokunganiki amandla komnye umntu. Kufuneka kugqitywe ngolo hlobo awukwazi ukuzinikela kwimihla yokuqala kwaye unike konke Ngale ndlela babona ukuba banayo yonke into abayifumanayo kwaye baya kuphulukana nayo yonke inzala ekuhambeni kwexesha.
Makhe ndifumanise ukuba unjani kancinci kancinci. Unokunikela ngeyona nto ingcono kwimihla yokuqala ukuze umdla umbambise, kodwa soloko ugcina okuninzi ukuze akufumane ngokuzolileyo. Kufana nomdlalo, kufuneka yenza loo mfihlelo ngokucothayo, ukuba umdla ugcinwe. Kodwa ungayithathi ngokugqithisileyo, kufuneka ubonise umdla kwaye ungatsibi echibini ukusuka kumzuzu wokuqala.
Mhloniphe loo mntu kwaye ubanike ixesha lakhe
Sonke siyayidinga indawo yethu kwaye asinakucinga ngesiquphe qala ubuhlobo obunzulu ngobusuku. Mhlawumbi iinjongo zakho zahlukile kwaye ungathanda ukuchitha ixesha elininzi kunye naye ukuze umazi kwaye ujabulele ukuba kunye naye. Akufunekanga ubonise umdla ongaka kwaye unyanzelise ubudlelwane, okukhona ukuphelelwa lithemba kuphawulwa, kokukhona kuya kuhambela kude kuwe. Kufuneka uyivumele loo nkwenkwe ukuba ibunandiphe ubomi bayo, iqhubeke inxibelelana nezinto eziyithandayo nokuba ichitha ixesha nabahlobo bayo.
Kufuneka ube ngumfazi anokumthemba, onokuthi ujike kuyo njengekhusi xa unengxaki. Ukuthuthuzela kunye nokuziva ukhululekile kunye nomntu yinto ephambili kuye nabani na. Bayathanda vula umntu oza kuphulaphula, bakwazi ukuxelela ukungakhuseleki kwabo, uloyiko lwabo kunye nokukwazi ukuba nomntu oza kubanceda. Ukuba konke oko kugcinwe, uya kukwazi ube nomntu ecaleni oko kubonisa ubuxoki bakhe kuwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Kufanelekile » Isibini kunye nokwabelana ngesondo » Indlela yokoyisa indoda
Wenzani umntu otshatileyo xa ethandana nomnye umfazi